पेरूमा क्यारल, पुरातात्विक पर्यटन | यात्रा समाचार
पेरूमा क्यारल, पुरातात्विक पर्यटन
पेरू पुरा अमेरिकाको पुरातात्विक दृष्टिकोणबाट यो सब भन्दा चाखलाग्दो देश हो। यसको संस्कृति धेरै धनी छ र यदि तपाईं एक जस्तै इतिहास र पुरातत्वको प्रेमी हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई यो मनपर्नेछ। एक सुन्दरता।
केही समय पहिले हामीले Huayna Picchu को बारेमा कुरा गर्‍यौं र आज पालो आयो क्याराल, पुरातात्विक साइटहरूको अर्को जुन तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्नेछ। यो पेरूको राजधानी लिमाबाट १ 182२ किलोमिटर मात्र पर छ र तपाईं आफ्नै ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ वा भ्रमणका लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी तपाईंलाई सबै विकल्पहरू छोड्दछौं र तपाईंलाई जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा जान्नुहोस्।
2 Caral भ्रमण गर्नुहोस्
3 केरालमा के हेर्ने
पुरातात्विक साइट लिमाको नजिकै छ, सुप उपत्यकामा। पुरातत्वविद्हरू भन्छन् कि यसको केहि छ पाँच हजार वर्ष पुरानो त्यसो भए त्यो डेटि withको साथ यो महाद्वीपको सब भन्दा पुरानो शहर हो। स्पष्ट छ, युनेस्कोले यसलाई विचार गरेको छ विश्व सम्पदा साइट।
को जटिल मन्दिर र भवनहरू, र त्यहाँ कुनै अभाव छैन पिरामिडहरू, यो तथाकथित केरल सभ्यता द्वारा निर्माण गरिएको हो कि विशेषज्ञहरूका अनुसार BC,००० र १ 3०० ईसा पूर्वको बीचमा विकसित गरिएको थियो भन्ने विचारमा यो सुमेर, भारत, चीन र इजिप्टको सभ्यताहरूको साथ समकालीन थियो। अर्को विवरण जुन पिरामिडको निर्माणलाई ध्यान दिएर बेवास्ता गर्न सकिदैन, हैन? र यी संरचनाहरू सम्पूर्ण संसारभरि नै निर्माण भएका थिए भन्ने प्रश्न फेरि आउँछ ...
क्याराल यो प्रशान्त तटबाट २ 23 किलोमिटर मात्र पर छ र हामी वास्तवमा उही क्षेत्रको बस्तीहरूको सेटमा यो पत्ता लगाउन सक्छौं, क हरियो र उर्वर उपत्यका, पहाडहरूसँग जसले यसलाई सुरक्षित गर्दछ। त्यहाँ आठवटा बस्तीहरू छन् तर क्याराल सबैभन्दा प्रभावशाली छ। यो अविश्वसनीय छ कि यी भग्नावशेषहरू २० औं शताब्दीसम्म राम्रोसँग भेटिएन, वा हुनसक्छ यो राम्रो थियो, तर यो उत्तर अमेरिकी अन्वेषकहरू थियो जसले तिनीहरूले उनलाई १ 1949। in मा भेट्टाए.
Years 43 वर्ष अगाडि पेरुभियन पुरातत्वविद्ले उक्त भग्नावशेष रेजिस्टर गरे तर यो साइट उत्खनन गरिएको १ 1979। Until सम्ममा थिएन र त्यसबेलादेखि भग्नावशेषहरूको खोजी गम्भीर थियो। कार्बन १ dating डेटि Withका साथ पुरातत्वविदहरूले निर्धारित गरे कि क्यारल 14,००० वर्ष पुरानो हो, त्यसैले यो जानेर अमेरिकी सभ्यताको बारेमा सोचेका सबै कुरा परिवर्तन भयो। निस्सन्देह, आजसम्म यो शहर किन परित्याग गरिएको थियो वा सभ्यताको पतनको कारणले थाहा छैन।
Caral भ्रमण गर्नुहोस्
Caral गर्न तपाईं कार, यात्रा वा सार्वजनिक यातायातबाट जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले यो अन्तिम विधि छनौट गर्नुभयो भने, तपाईंले लिमाको एउटा बस लिनु पर्छ जुन उत्तरमा जान्छ, सुपेमा, Panamericana नोर्टेको १ kilome187 किलोमिटरको दूरीमा। तपाईं सुपे मार्केटमा जानुहुन्छ र ठाउँबाट मात्र एउटा ब्लाक तपाईं ट्याक्सी श्रेणी छ जुन तपाईंलाई क्यारालमा लैजान्छ। तपाईं उसलाई एक निश्चित समय मा उठाउन र सबै बन्द गर्न को लागी व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्यथा तपाईं उही ठाउँबाट अर्को सामूहिक बस लिन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई कम्प्लेक्सको प्रवेशद्वारमा छोड्दछ, यसबाट २० मिनेट पैदल। कारबाट तपाईं Panamericana Norte किलोमीटर सम्म १ until20 सम्म लिनुहुन्छ, सुपेको शहर भन्दा अलि अगाडि, र केरलमा तपाईंलाई लैजाने संकेतहरूको पालना गर्नुहोस्। जटिल सोमबार देखि आइतबार बिहान9देखि साँझ open सम्म खुला रहन्छ तर विचार गर्नुहोस् कि अन्तिम समूह at मा प्रवेश गर्न अधिकृत छ। दर वयस्क ११.२० पेरुभियन तलवाहरू हुन्छन्।
भ्रमण निर्देशित छ, उपयुक्त व्यक्तिको प्रभारी, र २० व्यक्तिको समूहहरूको लागि २० नयाँ तलहरू भुक्तान गरिन्छ। यो स्पेनिशमा छ यद्यपि दुबै स्पेनिश र अ English्ग्रेजीमा संकेतहरू छन्। यात्रा लामो रहेको गणना गर्नुहोस् घण्टा र आधा। समूहहरू गठन गरीन्छन् कि उनीहरूको पालो पर्खाइन्छ र खाना र बाथरूम क्षेत्र रहेको रिसेप्शन र रेस्ट एरियामा पर्खन्छन्। सप्ताहन्तमा गाउँलेहरू आफ्ना उत्पादनहरू बेच्छन्, तर हप्ताको समयमा तपाईंको आफ्नै खाना र पानी ल्याउन सुविधाजनक हुन्छ।
केरालमा के हेर्ने
पवित्र शहर यो टेरेसमा निर्माण गरिएको थियो जसले यसलाई प्रकृतिको असुरक्षाबाट बचायो र यसको भवनहरू काठ र ढु of्गाले बनेका छन्। त्यहाँ छन् छ पिरामिड कुल र गोलाकार वर्गहरूमा, सबै एक क्षेत्रमा Hect hect हेक्टर लगभग दुई क्षेत्रहरुमा विभाजित, परिधीय र केन्द्र।
केन्द्रीय क्षेत्रमा छन् आवासीय परिसर र सार्वजनिक भवनहरूकेही उत्तरको माथिल्लो भागमा अवस्थित छन् र पिरॅमिडहरू र तिनीहरूको अगाडि दुई डूबिएको गोलाकार वर्गहरू सहित एउटा वर्ग र अन्य तल्लो आधामा दक्षिणमा अवस्थित साना भवनहरू, एउटा वेदी, एउटा एम्फीथिएटर र घरहरू। बाहेक, परिधिमा, अधिक निवासहरू समूहीकृत छन्। यस्तो देखिन्छ कि पिरामिडहरू, विभिन्न आकारका, पहेंलो र सेतो रंगका छन्, कहिलेकाँही रातो। उनीहरूको केन्द्रमा एक सिढी छ र शीर्षमा त्यहाँ धेरै कोठाहरू छन्।
सबैभन्दा ठूलो पिरामिड २ 28 मिटर अग्लो छ र यो क्यारलको क्लासिक पोस्टकार्ड हो। अर्कोसँग भूमिगत सुरुnel र शीर्षमा आगो पिट छ, अर्को १ 18 मिटर अग्लो छ। प्रत्येकको आ-आफ्नै विशेषता हुन्छ। भवनहरू पछाडि फेला पार्दछ कपडा, संगीत वाद्ययन्त्र र क्विपस महत्त्वपूर्ण छन्। वास्तवमा, एउटा पिरामिडमा एक क्विपु फेला पर्‍यो, थ्रेड र गाँठहरू जुन सूचनाको संरक्षण गर्न वा सञ्चार गर्नको लागि उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, जुन पेरूको सब भन्दा पुरानो मानिन्छ।
सा wind्गीतिक हावाका उपकरणहरू, कर्नेट्स र बाँसुरीहरू, रंगीन कपडा, लुगाफाटा, माछा मार्ने जाल, तार, जुत्ता र भूग्लिफ पनि त्यस्तै फ्लोरमा भेटिए जसले आकाशलाई अवलोकन गर्ने सोचाइ राख्छ। पुरातत्वविद्हरूले भने कि क्याराल एक हजारदेखि thousand००० सम्मको जनसंख्याको घर थियो जहाँ रईसहरू र धार्मिक र सर्वसाधारणहरूबीच धेरै फरक फरक सामाजिक भेदभाव रहेको थियो। सभ्यता मूलतः माछा मार्ने काम गर्थ्यो र कृषि र अनुसन्धानले संकेत गर्‍यो कि उनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू अन्य जनसंख्यासँगै आदानप्रदान गरे, तिनीहरू क्षेत्रीय आर्थिक पूंजीजस्तो।
यो जानकारीको साथ तपाईं यी महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक खण्डहरू हराउनको लागि तयार हुनुहुन्छ, पेरूमा, अमेरिकामा र विश्वमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » पेरूमा क्यारल, पुरातात्विक पर्यटन